Beesha uu ka soo jeedo ayaa Hargaysa looga musaafuriyey | allsanaag
Beesha uu ka soo jeedo ayaa Hargaysa looga musaafuriyey
Faqash baa tahay sidee kuugu ogolaanaa inaad Hargaysa gudaha u gasho
Maamulka beelaha Isaaq ku midaysan yihiin ee SNM, ayaa waxay u diideen Afhayeenkii Hore ee Wasaarada Aminga dowlada Federaalka Soomaliya Cabdicasiis Xildhibaan inuu gudaha Magalada Hargayso u galo, waxaana dib loogu musaafuriyey Magaalo madaxda Soomaliya ee Muqdisho.
Mid ka mid ah madaxda maamulka garoonka ayaa afhayeenka ku yidhi ” Adeer Faqash baa tahay ( Faqash waa ery edeb daro ah oo loogu yeedho Soomaalida aan Isaaqa ahayn) ee sidee kuugu ogolaanaa inaad gudaha u gasho magaalada Hargaysa oo Faqashtu diyaarado ku weerarteen.
Afhayeenka ayaa inta uuna Hargaysa gaarin, oo aan laga masaafurin isaga oo magaalada gudaha u gelin, wuxuu ka hosoo maray in badan oo ka mid ah maamulka Puntland. Meeshuu tagona Soomaalinimo aya loogu soo dhoweenayey.
Magaalada Garowe ee caasimadda Puntland waxa ku soo dhoweeyey madaxda ugu saraysa Puntland iyo labada qoraa ee ugu caansan Soomaaliya Idaajaa iyo Maxamed Xasan
Daawo afhayeenka oo si Soomaalinimo ah , gobonimo leh, marti sharaf uu dareemayo gaari ugu dhex socda Caasimadda Puntland ee Garowe
← Ra’iisul Wasaare Khayre oo Muqdisho Ka Dhagax Dhigay Golaha Dhaqaalaha Qaranka. Maleeshiyaad isu soo dhiibay Puntland →